Mayelana NATHI - Baoding Mingshuo Electrical Equipment Manufacturing Co., Ltd.
1.Singumkhiqizi iminyaka engaphezu kwengu-10 i-R & D nesipiliyoni sokukhiqiza, Noma nini lapho kunenkinga kuMshini Wokushisela Wokuvama Okuphezulu, singathola inkinga futhi siyixazulule, bekungeke kube yisimo esiphoxa abantu abangatholakali ngemuva iminyaka eminingi.
Ukusekelwa Kwezintengo ezi-2
Inikezela ngentengo engcono kakhulu yozakwethu, futhi sifisa ukuthi abasebenzeli bethu noma abasabalalisi bathole inzuzo enkulu nokwabelana ngemakethe.
3. Technique & Sales Ukusekela
Iwaranti yonyaka owodwa. Ihlinzeka ngokuxhaswa kokuthengisa njengekhathalogi yokwethulwa, imibhalo yezobuchwepheshe, inkomba, ukugada ukufakwa kusayithi nokuqeqeshwa kokusebenza kokukhiqizwa kamuva, kugcwalisa ukuthunyelwa nokusekelwa okuku-inthanethi.
4. Ukunikeza Ukuvikelwa Kobuningi
Singaqinisekisa ubuningi bama-oda ngenkathi eshisayo noma ukushoda. I-oda lakho lizothuthukiswa.
5.Trade ukwesekwa fair
Sizobamba iqhaza embukisweni wensimbi owenziwe ngensimbi njalo, njenge-International Tube & Pipe Industry Trade Fair emazweni ahlukene, ukushintshana nokuxoxa ngezindaba ngepayipi lensimbi.
Uhlobo luni lwenkonzo iqembu lethu elingakunika lona?
Usizo lwabenza imisenenzi Sales Team:
Ukunikeza umbono wobungcweti nezeluleko kumakhasimende, ukukusiza ukuthi uthole ukuthi ubuningi nohlobo luni lweSolid state HF Welder ziyifanele imfuneko yakho.
Ukusekelwa Kweqembu Lobuchwepheshe:
Yonke imfuneko yezobuchwepheshe, noma ngabe inkulu noma incane, Ithimba lethu Lobuchwepheshe lizohlaziya imfuneko futhi lenze impendulo enemininingwane kumakhasimende.Siphinde sisekele okwenziwe ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Ithimba Lokulawula Ikhwalithi:
Yonke imikhiqizo izobhekwa yiThimba Lethu Lokulawula Amakhwalithi, ukuqinisekisa ukuthi yonke imikhiqizo ngeke ibe nohlu lwezinkinga ku-Quality Control Manuel .Ezinye izingxenye zokuphehla ugesi ziye zelashwa okukhethekile ukubenza bakwazi ukumelana nokushisa okuphezulu kanye nengcindezi ephezulu.
Ngemuva Kweqembu Lokuthengisa:
Leli qembu lizokuphatha ngemuva kwensizakalo yokuthengisa kuwe, bazokunikeza ngokushesha isixazululo semininingwane yombuzo noma inkinga obukade ubhekene nayo.